Zviitiko mukusarudza bhasikoro remagetsi.
musha Blog Zviitiko mukusarudza bhasikoro remagetsi
Zviitiko mukusarudza bhasikoro remagetsi
Zuva ： 2021-07-24 Zvikamu:Blog Views: 1,376 maonero
Electric bike inzira yakajairika yekufambisa muhupenyu hwedu. At
parizvino, kune akawanda mabhasiketi emagetsi emagetsi muChina. Vanhu vazhinji havadaro
kuziva kusarudza. Muchokwadi, patinosarudza bhasikoro remagetsi, isu hatisi kungotarisa
pakuonekwa, asi zvakare funga zvimwe zvinhu. Ngatitaurei nezve maitiro
sarudza electric bike.
1. Magetsi bhasikoro zvikamu senge furemu.
Uyu ndiwo musimboti, asi vanhu vazhinji vanozvifuratira. Iko kuomarara kwemuviri wemagetsi bhasikoro uye kuomarara kwezvinhu izvo hazvingobatanidzi nyaradzo chete, asiwo kuchengetedzeka. Iwe haugone kuona izvi nemaziso ako. Unofanirwa kuyedza kukwira nemuviri wako. Wakaedza zviono zvakaita semigwagwa ine mabhureki, mabhureki akangoerekana aitika, uye kutendeuka kwakapinza kuti unzwe kuomarara uye kutsigirwa kweiyo electric bhasikoro. Iyo furemu yakafanana nechassis yebhasikoro remagetsi, a electric bike ine yakasununguka chassis, kunyangwe yakakwira sei iyo yekumisikidza, kunyangwe ine simba sei iro simba system, inotongerwa kukundikana.
Seye bhureki rekushandisa remagetsi bhasikoro, kunyangwe mabhureki akachengeteka uye akachengeteka panguva yekukwira zvinoenderana nazvo, kunyanya kana kumhanya kwacho kuchikurumidza kana kudzika, uye kana mugwagwa uchitsvedza pamazuva ekunaya, kunyangwe mabhureki emabhasikoro emagetsi akavimbika kana kwete yakabatana zvizere neyaiye mutasvi. Kuchengetedzwa kwehupenyu nepfuma, pamusoro pezvo, mhando yematai anoenderana nemabhureki anotamba chinhanho chakasimba mukuchengetedzwa kweyechinyakare yemagetsi bhasikoro kukwira. Hunhu hwemagetsi emabhasiketi emagetsi anokanganisa kuchengetedzeka uye ruzivo rwevatasvi. Parizvino, mabhureki emhando dzezvigadzirwa zvemagetsi zvemagetsi pamusika zvinonyanya kuve zvakapatsanurwa kuita mabhureki uye dhiramu remabhureki. Disc akamedura inonziwo Disc akamedura. Iyo disc disc brake disc inosundira iyo brake caliper kuburikidza ne hydraulic pombi yekubata iyo brake disc zvine simba. Iyo braking musimboti wehubhu brake ndeyekudhonza kana kusundira iyo brake hub mune iyo brake hub kuitira kuti shangu dzinovhara pamativi ese ari maviri padyo nemadziro emukati evhiri kuti riite braking mhedzisiro. Kubva pakuenzanisa kwemaviri, mabhureki emabhureki emadhisiki kazhinji ari nani pane emabhureki engoma.
3. Eeectric bhasikoro bhatiri kugona
The electric bike battery Unyanzvi hunonongedza chaimo rwizi rwebhasikoro remagetsi. Kana bhatiri iri kuchembera, kugona kudonha, kana kushanda kwemotokari kuri kusarongeka, kufambisa kwacho kunodzivirirwa, uye simba rekushandisa rakawanda, nzvimbo yekufambisa iri zvakare yakajairika kumhanya kupfupi, uye mamaira makumi manomwe Iyo yakangwara mota yemagetsi. inoshandisa tekinoroji yepamusoro ye lithiamu bhatiri, iyo inogona kubhadhariswa zvizere mumaawa 70, uye dzidziso inokwanisa kutyaira ichienderera kwe7.5km kana yakazara zvakakwana. Iko bhatiri kugona kunoenderana nekutsungirira kwemagetsi magetsi Naizvozvo, edza kusarudza yakakura-inokwana bhatiri, uye hachizi ine mukurumbira wakanaka.
Tags:electric bike electric bike battery Magetsi bhasikoro zvikamu
Prev: Magetsi bhasikoro ekuchengetedza matipi (1)
Next: Magetsi bhasikoro ekuchengetedza matipi (2)
Bhasikoro remagetsi kuchinja system
Kuchengetedza kwekutasva bhasikoro remagetsi
Nzira yekusarudza chaiyo bhasikoro remagetsi
Magetsi bhasikoro bhatiri matambudziko ekushandisa
Nguva yechando kutasva, iwe unofanirwa kuziva zvinoonekwa
Wakwira bhasikoro nhasi?
Shuangye bhasikoro emagetsi bhatiri 36V 8AH 10AH